Labsiin Yeroo Muddamaa qabsoo nu harkatti qancarsuu fi injifannoo dhiigaan argamte nu harkaa baasuu hin qabu - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Labsiin Yeroo Muddamaa qabsoo nu harkatti qancarsuu fi injifannoo dhiigaan argamte nu...
By Harun Hassen | Wixineen Labsiin Yeroo Muddamaa kan ifa godhe Komaand Poostiin caasaa Oromiyaa amma jiru diiguu fi dadhabsiisuu irrattis kan hojjatu ta'uu isaati
Wixineen Labsii Yeroo Muddamaa (LYM) wanti ifa godhe yoo jiraate labsiin kuni paarlaamatti dhiyaatee darbinaan Oromoo fi Oromiyaa rakkoo guddaaf kan saaxilaman ta’uu isaati. Labsiin kuni keeyyata hamaa, kanniin akka bulchiinsa Oromiyaa dadhabsiisuu fi woraanni akka ummata ajjeesuuf haala mijeessu heddu uf keessaa qaba.
Akka wixinee labsii kanaatti Komaandi Poostiin maqaa bulchiinsa jige deebisanii ijaaruu jedhuun caasaa haarawa Oromiyaa keessatti ijaaruuf, ummata aantummaa sabaa qaban kaasaa kittillayyoota isaanii ummatatti fe’uuf, mirga qaba. Komishinara Poolisii Oromiyaa, Ittafaa Tolaa, kaasuun tankaarfii jalqabaati. Tankaarfiin Naqamtee irratti fudhatanis wanta gara funduraatti badhinaan itti deemamuuf jiru agarsiisa. kayyoon isaanii guddaan bulchiinsa Lammaa Magarsaa haafaa fi hidda dhabsiisuu, ummataa fi bulchiinsa kana gargar baasuudha. Itti milkaayuu hin qaban!
Gama biraatiin, caasaan tikaa hundi, Poolsii Oromiyaas dabalatee, Komaand Poostii jalatti gala. Ajaja Saamoraa fi Geettaachootiin hojjatu. Tankaarfii isaan itti laatan fudhatu. Caasaan mootummaa, federaalaa fi naannoo, dirqama Komaandi Poostiif ajajamuu qabu. Namni deeggarsa quubsaa Komaand Poostiif laatuu dhabe hidhaa hanga woggaa 5’n adabamuu mala. Aangoo irraa ari’amuun tankaarfii isa salphaadha. Komad Poostiifs bajata kan ramadu federaalaa fi mootummaa naannooti. Humna weeraraaf gara Oromiyaatti ergame Oromiyaan qallabuuf dirqamti jechuudha.
Komaand Poostiin miidiyaa kamiinuu cufsiisuu ni danda’a, akka wixinee labsii kanaatti.
Komaand Poostiin ummata Naannoo Somaalee irraa buqqa’es bakka filataniitti qubsiisuu osoo hin taane humnaan gara lafa irraa buqqa’anitti deebisuuf karoorfateera. Ammas, Komaand Poostii jalatti saamtota irraa lafa deebisuun hin danda’amu. Saamichi lafaa badhinaan itti fufa jechuudha.
Dirqamni paarlaamaa Labsii Yeroo Muddamaa kana raggaasisuudha. Garuu, takka raggaasisnaan labsii kana kaasuu irratti qoodaa fi humni parlaamaan qabu baay’ee murtaayaadha. Akka ka’uuf yaada kan dhiyeessu caffee ministerootaati. Hanga caffeen ministerootaa LYM akka ka’uuf yaada hin dhiyeesinitti LYM akkuma ragga’etti tura jechuudha. Woyyaaneen labsiin kuni baatii 6’f tura jettus keessabeektonni heddu labsiin kuni yoo xiqqaate woggaa 2 ‘f kan turu ta’uu isaati kan irratti woliigalan.
Labsiin kuni kan xiyyeeffate Oromoo fi Oromiyaa irratti. Labsiin kuni, yoo ammatti akka hin raggaane hin goone, ykn ammoo tooftaa irra aannuun cimaa lafaa hin qabaanne, qabsoo nu harkatti qancarsuu fi injifannoo hanga ammaa dhiigaan argamte nu harkaa baasuu mala. Ifatti fedhii fi kaayyoon Woyyaanee isa kana. Hawwii fi abdii isii jaamsuun, irree tokkummaa Oromoo itti argisiisuun ammoo dirqama Oromoo hundaati. Diina abdii haa kutachiisnu!
Previous articleLabsiin Yeroo Muddamaa aarii ummataa daran hammeessuu malee hin tasgabbeessuu
Next articlePaarlaamaan labsii Yeroo Muddamaa raggaasise. Maaltu itti aana?
Labsiin Yeroo Muddamaa qabsoo nu harkatti qancarsuu fi injifannoo dhiigaan argamte nu harkaa baasuu hin qabu Mar 1, 2018 At 10:47 pm
[…] (awashpost) — Wixineen Labsii Yeroo Muddamaa (LYM) wanti ifa godhe yoo jiraate labsiin kuni paarlaamatti dhiyaatee darbinaan Oromoo fi Oromiyaa rakkoo guddaaf kan saaxilaman ta’uu isaati. Labsiin kuni keeyyata hamaa, kanniin akka bulchiinsa Oromiyaa dadhabsiisuu fi woraanni akka ummata ajjeesuuf haala mijeessu heddu uf keessaa qaba. […]